Times24 Nepal » केराको बारेमा २१ रोचक तथ्यहरु
केराको बारेमा २१ रोचक तथ्यहरु
प्राय केरा खाइरहेका हुन्छौ। तर केराबारे यी २० रोचक यथार्थ जानेपछि यो तपाईलाई झन् स्वादिलो लाग्न सक्छ। आउनुहोस् केराबारे २० तथ्यहरु जानी राखौ –
केरामा ट्राइप्टोफान पाइन्छ जुन मानिसले खाएपछि सेरोटोनिनमा रुपान्तरिक हुन्छ । यसले शरीरमा सेरोटोनिनको मात्रा बढाउँछ जसले प्रभावकारी र प्राकृतिक ढंगबाट डिप्रेसनका असरहरु घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। केरामा प्रशस्त मात्रामा शक्तिबर्द्धक तत्वहरु हुन्छ।कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि दुईवटा केरा खानाले शरीरमा नयाँ ढंगले शक्तिको प्रवाह हुन्छ।
केरामा पाइने पोटासियमले मांशापेशी बाउँडिने र पीडा हुने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्दछ । दूधसँग केरा खानुहोस्। यसबाट प्रशस्त क्याल्सियम पाइन्छ । महिलाको लागि केराको सेवन विशेष उपयोगी छ ।किनकी यसले महिनावारीसम्बन्धी दुःखाईको फैलावट घटाउँछ । केरामा अधिक मात्रामा भिटामिन बि पाइन्छ, जसले सेतो रक्त कोषिकाको वृद्धिमा सहयोग गर्दछ । यसबाट शरीरमा विभिन्न मधुमेहजस्तै धेरै रोगहरुबाट बचाउँछ।
तपाई रक्तअल्पताबाट पीडित हुनुहुन्छ भने केरा तपाईको साथी बन्न सक्छ। किनकी केरामा फलाम तत्व पाइन्छ।उच्च रक्तचापको समस्या झेलिरहेकाहरुलागि पनि केरा साथी बन्न सक्छ, किनकी यसले उच्च रक्तचाप घटाउन सहयोग गर्दछ। केरामा पेक्टिन नामक तत्व पाइन्छ जसले हामीलाई पाचनमा सहयोग गर्दछ। मुटु पोल्ने गर्छ? केरा खानुहोस। यसमा एन्टासिड औषधीको गुण हुन्छ। केरा एक मात्र त्यस्तो खानेकुरा हो जसले पेटमा हुने अल्सरसँग लड्न सक्छ। स्वास्थ्य विज्ञानमा मृगौलासम्बन्धी रोग र हाड टुक्रिने समस्याका लागि केराको सेवनले प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान गर्ने मान्यता राखिन्छ।
केराको सेवनले कामप्रति दत्तचित्त र सचेत हुन सहयोग पुग्दछ । तपाई जुनसुनै कार्यक्षेत्रमा हुनुहोस्, एउटा केराको सेवनले तपाईलाई कामप्रति कन्सन्ट्रेट गराउँछ। ब्लूबेरीहरु (एकप्रकारको ऐंसेलु) मा जस्तै केरामा पनि अधिक मात्रामा एन्टीअक्सिड्यान्ट पाइन्छ। खाना खाने बेला केरा खानाले रगतमा चिनीको मात्रालाई सामान्यीकरण गर्न मद्दत गर्दछ।
किराले टोकेको ठाउँमा चिलाइरहेको छ? केराको बोक्राको भित्री भाग टोकेको ठाउँमा दल्नुहोस्, यसले तत्काल चिलाउने समस्याबाट मुक्त हुनुहुन्छ।